महराको डेटिङ र बाँस्कोटाको सेटिङ !! – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / महराको डेटिङ र बाँस्कोटाको सेटिङ !!
कुन काण्डको मात्रै बयान गर्नु रु तपाईं र मैले त के, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि बयान गरेर साध्ये नलाग्ने काण्ड १
खाइहालेको होइन क्यारे, खान खोजेको मात्रै हो । बोलेको कुरा फिर्ता लिएर सफाइ दिए नि हुन्छ । चोरेको कुरा फिर्ता गर्छु भन्दा त मुक्ति पाउने नजिर बसेको देशमा जाबो मुखले बार्गेनिङ गरेको त हो, म अब त्यस्तो गर्दिनँ भन्दा किन मुक्ति नपाउने रु काण्ड, काण्ड भनेर हेप्ने ? उज्यालो अनलाइनबाट साभार
Previous: घोराहीको इतिहास झल्काउन घोडाको प्रतिमा
Next: दाङको बेलझुण्डीमा प्रदेश एक्स्पो सुरु